M Ji Anya M Hụ Ihe Baịbụl Na-ekwu | Pepo Devidze
E MERE YA BAPTIZIM N’AFỌ 1993
ONYE Ọ BỤ Ndị mụrụ ya na-ekpe Chọọchị Ọtọdọks nke Jọjia. O bu chọọchị a n’isi. Mgbe ọ ghọrọ Onyeàmà Jehova, ya na di ya rụrụ ọrụ na Betel. Ha bụ ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche ugbu a.
MGBE mbụ m nụrụ banyere Ndịàmà Jehova bụ mgbe m nọ n’ụlọ akwụkwọ dị elu na Kutaịsi. Otu onye agbata obi m gwara m na Ndịàmà Jehova anaghị eji ihe a kpụrụ akpụ ma ọ bụ ihe e sere ese efe Chineke, nakwa na ha ekweghị na Jizọs bụ Chineke Onye Pụrụ Ime Ihe Niile. Ihe a dị iche n’ihe a kụziiri m na Chọọchị Ọtọdọks. Ejikwaghị m ihe ndị a kụziiri m egwu egwu.
Mgbe m lọtara ụlọ n’obodo anyị bụ́ Tisageri n’oge ọkọchị afọ 1992, m chọpụtara na Ndịàmà Jehova nọkwa na ya. Mama m anụla ọtụtụ okwu ọma ndị mmadụ na-ekwu gbasara ha. Ma, ebe ọ ghọtara na m ka na-ewere Ndịàmà Jehova ka ndị ọjọọ, ọ gwara m, sị: “Gaa jiri anya gị hụ ihe ha na-akụzi.”
E nwere ndị ọsụ ụzọ abụọ aha ha bụ Nwanna Pavle na Nwanna Paata na-abịakarị amụrụ otu ezinụlọ bi anyị nso Baịbụl. Ọ na-abụ ha bịa, ọtụtụ ndị agbata obi anyị abịa na-ege ihe ha na-ekwu ma na-ajụ ha ajụjụ. Otu ụbọchị, m gara soro ha mụọ ihe. Mgbe ọ bụla m jụrụ ha ajụjụ, ha na-emepe Baịbụl ha ma sị m gụọ ya. Ihe a ha na-eme nyeere m ezigbo aka. O mere ka m jiri anya m hụ ihe Baịbụl na-ekwu.
Obere oge ihe a mechara, m bịara soro ná ndị ha na-amụrụ Baịbụl. N’afọ ọzọ ya, e mere mmadụ iri n’ime anyị baptizim. Mama m mechakwara ghọọ Onyeàmà Jehova.
Ọ na-abụ m cheta otú ụmụnna ndị ahụ si gosi m azịza ajụjụ niile m jụrụ ha na Baịbụl, mụ ejirikwa anya m hụ ha, obi na-atọ m ụtọ. Ihe a mere ka m ghara ịna-ewe iwe ma ọ bụrụ na ndị mmadụ ekwetaghị ihe m na-akụziri ha. M gaa ozi ọma, m na-esikwa na Baịbụl aza ndị mmadụ ajụjụ niile ha na-ajụ m n’ihi na m na-echeta na ọ bụkwa otú e si kụziere m Baịbụl.